admin – DARYEELRELIEF
Shirka Samatabixinta Midnimo iyo Waxqabad ee Deegaanka Dhabad.
Waxaa Shirkan soo qaban qaabiyey hay ada Midnimo iyo Waxqabad wuxuuna ahaa kii sadexaad Laguna soo gaba gabeeyey Deegaanka dhabad..Shirkan oo ay kasoo qeyb galeen qeybaha bulshada sida Odoyaasha Dhaqanka. Culuuma udiinka, waxgaradka Haweenka,bulshada rayidka ah iyo Dhalinyarada. Shirkan oo ujeedadiisu aheyd Horumarinta bulshada sida Waxbarashada Caafimaadka iyo Kaabayaasha adeega bulshada iyo midnimada umada in …
Shirka Samatabixinta ee Midnimo iyo Waxqabad Degmada Saaxo.
Shirkan oo ay isugu yimaadeen Qeybaha bulshada kala duwan sida:Odoyaasha Dhaqanka,Culumaa,udiinka,Ganacsatada, Waxgaradka,Haweenka iyo Dhalinyarada ayaa waxaa looga hadley arimo badan oo bulshada deegaanka dan uwada ah. Waxaa shirkan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey bahweynta Midnimo iyo Waxqabad oo kaashaneysa bulshada rayidka iyo maamulka shirkan mid lamid ah ayaa hrey horey uga dhacay Degmada Caabudwaaq,Degmada Saaxo …
Kulan Looga Hadlayay Hormarinta Iyo Midnimada Oo Ka Dhacay Caabudwaaq.
Kulan ay ka soo wada qeyb galeen bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa ka dhacay degmada caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Munaasabadaan oo ay soo qabanqaabisey hay`ada daryeelrelief ayagoona ka qeybgaleen Culmaa`udiin, Waxgarad, Siyaasiin Haween iyo Dharanyaro ayaa waxaa ay ku soo gebigabowday jawi wanaagsan. kulankaan oo soconaayay mudo labo maalin ah 26 ilaa iyo 27 Agosto ee …
Daryeelrelief oo bilowdey jamcinta Zakaatulfidriga 1436h.
Wargelin Waxaa la ogaysiinayaa dhammaan bahda daryeelrelief, Midnimo & Waxqabad meelkasta oo ay joogaan in la bilaabayo uruurinta Sakaatul Fitriga la bixiyo bisha barakaysan ee Ramadhaan, taasoo lagu go’aamiyey kulankii 27kii bishan June 2015 ay yeesheen mas’uuliyiinta sare ee hay’adda Daryeelrelif, Midnimo iyo Waxqabad. Kaddib markii la xaqiijiyey baahida lixaadka leh ee ka jirta deegaannada …
Waxaa lasoo gaba gabeeyey dayactirkii derbiga Isbitaalka Dhabad oo kamid ahaa qeybaha ugu muhiimsan dhismaha (17.5.2015).Hawshaas baaxada leh ee laga qabtey Isbitaalka oo ay u istaageen Ururka Daryeelrelief and Education Org oo ah hay,ad samafal oo ku tiirsan taageerada iyo deeqbixiyeyaasha Midnimo iyo Waxqabad ku mideysan. Waxaa Dayactir aad ubalaaran lagu sameeyey sanadkii 2014 qeybtii …
Warbixinta Dhaso ee Daryeel
Mustaqbalka Dhaso iyo Daryeel Deegaanka Dhaso waxay udhaxaysaa Ceelwaaq iyo Ceelcade. waxayna afartan kilow mitir(40km) ujirtaa degmada Ceelwaaq. degmada Dhaso waa magaalo mudo dheer soo jirtay ,oo qadiimi ah,soona martay heerar kala duwan oo loo degaameeyey. walow dadka deeganku ay ubadan yihiin xoolo dhaqato hadana waxaa jira bararug badan oo ah dhanka magaalaynta degmada dhaso,taas …
Naftaada waxtar Umadana waxtar:
‪ السلام عليكم ورحمت الله وبركاته. QOF WALBAW NAFTAADA WAXTAR UMMADDAADANA WAXTAR. 1-Meelkasta oo aad aduunka kaga nooshahay fursad baa taalla ee noqo kan ka faa iidaysta. 2-Umadaha ula dhaqan sida adigu aad jeceshay in laguula dhaqmo. 3-Ogoow safiir baad umaddaada u tahay meelkasta oo aad joogtid. Hagaaji Hab dhaqankaaga,Wanaaji hadalkaaga Bulshaa dhexdeeda. 4-Ruux wax …
Midnimo & Waxqabad (Daryeel)
Midnimo iyo waxqabad waxyaabaha ay ku caan baxdey oo aad ka heleysid waxaa ka mid ah:Xiriirinta ehelka, Midnimada,Duceynta qalbi wanaagsan siddaQofka xanuunsan ama xaajaad lasoo dersaan,Qofkay geeri ku timaado markiiba loo duceeyo oo lagana warqabo oo horey aynaan u haysan iwm. Bixinta sadaqaadka Iyadoo qofkii $1 sadaqaysta shanta qaarad looga ducaynayo.Sidaa darteed walaalayaal kasoo wardoon …
Waxqabadka Daryeel ee Saaxo
Daryeel Relief & Education Org waxay qorsheyneysaa inay ka hir geliso dhowaan mashaariic ay kamid yihiin Goobaha waxbarashada, Caafimaadka iyo Qeybo kamid ah kaabayaasha adeega Bulshada oo wax tar weyn u leh dadka ku nool Degmada Saaxo Degmada saaxo waxay katirsan tahay Gobolka Mudug ee maamul goboleedka Puntland. Waxaa dhowaan laga hirgelyey Ceel biyood ay …
DEEGAANKA BELETULAMIIN IYO DARYEELRELIEF
Wakhtiyadii ugu danbeeyey waxay aqoonyahanada Beletulamiin iyo Council-kuba ku mashquulsanaayeen diyaarintii naqshada magaalada Beletultulamin,Allaah(sw) mahaddii hadda waa ladhameystirey hawlaha dhul bixintuna waa ay bilaabatey oo waa ay furan tahay: (Danbeeye Magaaro Doqoni calafmaleh)
SAWIRADA DHISMAHA MASJIDKA
Maxaa kuu diidaya wanaga